Famoronana haitafy :: Maimaim-poana ny fidirana amin’ ny “Mihamy Mada Fashion” • AoRaha
Famoronana haitafy Maimaim-poana ny fidirana amin’ ny “Mihamy Mada Fashion”
Tangorom-pamoronana. Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ny “Mihamy Mada Fashion”, karakarain’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera, etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina Mahamasina, hatramin’ny 15 Febroary 2020.
Habaka iray goavana ho an’ireo mpitia sy mpamorona lamaody, taovolo, kiraro, firavaka, hairary, haihatsarana, ary zaitra rehetra ny hetsika . Manantena ny hitohizan’izany sahady ireo mpandray anjara.
Vitsy ny toerana hahafahan’ny mpahay lamaody mivelatra sy maneho ny talentany tahaka izao. Samy nomena sehatra hanolorany ny talentany avy ireo mpamorona miisa efapolo mandray anjara amin’ity andiany voalohany ity. « Ny fampahafantarana sy fampirororoboana ary ny fampitiavana indray ny Vita Malagasy no tanjona », raha ny fanazavana azo. Nohamafisin’ny minisitra Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana ihany koa fa manana ny toerany amin’ny kolontsaina ny fomba fitafy sy ny famoronana.
Hisy ny fifampizarana traikefa, ny fanehoana ampahibemaso ireo asam-pamoronana mendrika sy miavaka izay nandalo fitsirihana manokana avy amin’ny minisitera mpikarakara. Afaka hanjifa ihany koa anefa ireo mpitsidika. Hanentana sy handrotsirotsy amin’ny alalan’ny mozikany ry Fy Rasolofoniaina, Mr Sayda, Melky, Bakidy Gegette, Nael, Rapo Atlas, Dassi and Friends, Mirado, Johanne, Fidy Dibl ary Jaojoby, mandritra izao telo andron’ny haihaingo sy ny famoronana izao.
Fahalasana mpanamory Nodimandry teo amin’ny faha62 taonany i Nirina Ratsifa
Fihaonana ACM-APAM :: Hamafisina ny serasera hisorohana ny loza